'I-Apple Support' yenza kube lula ukubona iwaranti nokutholakala kwemikhiqizo yethu | Izindaba ze-IPhone
'I-Apple Support' yenza kube lula ukubuka iwaranti nokutholakala kwemikhiqizo yethu
U-Angel Gonzalez | 07/04/2021 20:00 | Izaziso, Imikhiqizo ye-Apple
Ukuthenga okusha idivayisi engxenyeni yomsebenzisi kufanele ibe nochungechunge lwezici eziyisisekelo ukuze umthengi ahlale ezolile. Okokuqala, imininingwane yekhwalithi mayelana nedivayisi oyithengayo. Okwesibili, ukwenza izinto obala mayelana nendlela yokuthumela, ubude obulinganiselwayo nosuku lokuhambisa olulinganiselwe. Futhi ekugcineni, umbukiso we ukumbozwa kanye newaranti enikezwa yinkampani. I-Apple inikeza iwaranti yonyaka owodwa kuwo wonke amadivayisi ayo ngethuba lokuthenga umshuwalense owengeziwe, i-AppleCare. Ngesibuyekezo sohlelo lokusebenza olusha 'Ukusekelwa kwe-Apple' Singabheka iwaranti yamadivayisi wethu nokutholakala uma kwenzeka sine-AppleCare.
Bheka ukumbozwa kwedivayisi yakho kusuka ku-'Apple Support '
Dinga usizo? Thola ukwesekwa kwezobuchwepheshe okudingayo ngemikhiqizo yakho ye-Apple oyithandayo - konke kusuka endaweni eyodwa. I-Apple Technical Support ikunikeza ukufinyelela okwenzelwe wena ngezixazululo zayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ze-Apple. Funda ukuthi ungakuphatha kanjani okubhaliselwe kwakho noma usethe kabusha iphasiwedi yakho ye-Apple ID, phakathi kwezinye izinto.
U-Apple uthathe isinqumo qalisa uhlelo lokusebenza lapho uzogxila khona kusekelo nensizakalo yezobuchwepheshe asikho isidingo sokuhlanya kuwebhusayithi yakho. Kuyinto Ukusekelwa kwe-Apple, uhlelo lokusebenza olulula, olunemisebenzi ehlukahlukene futhi oluphelele olutholakalayo lwe-iOS ne-iPadOS. Njengoba iminyaka iqhubeka, uhlelo lokusebenza luvithamini ngezindaba eziningi futhi seluyindawo okuyireferensi yokucela usizo kwabasekeli bezobuchwepheshe futhi lucela nokuqokwa kwabakwa-Apple Store.
Nakhu ukuthi ungaxhumana kanjani nokuxhaswa kwe-Apple
Okusha Inguqulo ye-4.2 yethula izici ezintathu ezintsha ezithuthukisa ukusetshenziswa nokuhlinzeka ngemisebenzi emisha kubasebenzisi. Okokuqala, inketho yesikhumbuzi ihlanganisiwe ukubhuka ngezingcingo noma imiyalezo. Lokhu kufakwe ku-Apple Store ebonakalayo lapho bekwazisa khona lapho iGenius isikhululekile futhi ungaya esitolo. Noma kunjalo, kule nguqulo entsha lapho wenza ukubhuka ungasetha isikhumbuzi ngokuzenzakalelayo.
Iphinde yahlanganiswa ithuluzi lokuhlola ukumbozwa kanye nesimo sewaranti semikhiqizo yethu. Uma kwenzeka sine-AppleCare, singabona izici ezahlukahlukene esizimbozile nendlela yokuthola ukwesekwa esikudingayo. Ngaphezu kwalokho, a App Isiqeshana ukuhlola kalula iwaranti ukwethula inombolo ye-serial noma ngokukhetha idivayisi ye-Apple ID yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » 'I-Apple Support' yenza kube lula ukubuka iwaranti nokutholakala kwemikhiqizo yethu
Inethiwekhi ye-Apple's Find manje iyahambisana nezinsiza ezivela eceleni